erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ခွဲခြားအတွက်မှားယွင်းသောအော်ဂဲနစ် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြ2013နာများ (XNUMX) - Your Brain On Porn
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2013) ၏ခွဲခြားအတွက်မိစ္ဆာအော်ဂဲနစ်-psychogenic ခြားနားမှုနှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများ
သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ် (2003) 15, 72-78 ။ Doi: 10.1038 / sj.ijir.3900952
ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား: D Sachs1
1Connecticut, စတောစျ, Connecticut, အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်
စာပေးစာယူ: bd Sachs, Ph.D, စိတ်ပညာဌာန, ဦး-1020, Connecticut တက္ကသိုလ်, စတောစျ, မှန် CT 06269-1020, USA ။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
၈ Augustဂုတ် ၂၀၀၂ ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ စက်တင်ဘာ ၁၆ ကိုလက်ခံခဲ့သည်။
အော်ဂဲနစ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) အကြားရိုးရာခွဲခြားမှုကိုနိုင်ငံတကာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်မရှိသောသုတေသနအဖွဲ့၏ Nomenclature Committee ၏မကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီကွဲပြားခြားနားမှုရဲ့အဓိကပြနာများထဲမှတစ်ခုကတော့၎င်းသည်စိတ် - ခန္ဓာကိုယ်ခွဲခြားမှုကိုခေတ်မမီတော့သောအမြင်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ neurobiology ဗဟုသုတကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ 'psychosomatic' ၏အခြေခံအဓိပ္ပာယ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ချန်လှပ်ထားခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ ED သည်လူအားလုံး၏စိတ်ထဲတွင်ရှိသည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် ED ၏ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ခွဲခြားခြင်းနှင့်ကုသခြင်းနှင့် ED ၏အကြောင်းရင်းများကိုသုတေသနပြုခြင်းများတွင်အကျိုးဆက်များဖြစ်လာသည်။ Nomenclature ကော်မတီမှအဆိုပြုထားသောအခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုသည်ယခုအခါတွင် psychogenic ဟုသတ်မှတ်ထားသည့် ED ၏အကြောင်းရင်းများကိုပြန်လည်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးအခြားသူများအားအခြေအနေ၏ ED အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး၊ တွေ့ဆုံ။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အခွအေနေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, erectile ဇီဝြဖစ်စဉ်ခွဲခြား
ဤစာတမ်း၏ရည်မှန်းချက်မှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ 'အော်ဂဲနစ်' နှင့် 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ' အကြောင်းတရားများအကြားခွဲခြားထားသည့်အဆုံးကိုအဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုသည်တစ်ချိန်ကအသုံး ၀ င်ခဲ့သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာအတော်အတန်အပြစ်အနာအဆာများရှိနေပြီးရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုသခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်သင်ကြားရေးကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ ဤငြင်းခုံမှုကိုမတင်ပြမီနောက်ခံအချို့သည်အသုံးဝင်နိုင်သည်။
တချို့ကဆေးဝါးကုသမှုအလောင်းတွေတရားဝင်အဖြေရှာတဲ့ taxonomy ရှိသည်။ ဥပမာ, American Psychiatric Association ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM), လက်ရှိဗားရှင်း IV ရှိ။1 အခြားအအပြောင်းအလဲများကိုမယ့်အခြေအနေများများ၏အမည်များပါဝင်ပတ်သက်နေချိန်တွင်အဆိုပါ DSM, ခွဲခြားအတွက်အများအပြားအခြေခံကျကျအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအပါအဝင်ယင်း၏အဆက်ဆက် edition မှာ, ကျော်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူတို့နှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူအသုံးပြုပုံဥပမာစည်းဝေးကြီးတဲ့ကိစ္စအဖြစ်ခေါင်းကိုက်၏ခွဲခြားသူတို့ကိုအသုံးချနိုင်ပေမယ့်တခြားကျန်းမာရေးအဖွဲ့များတရားဝင်ထိုကဲ့သို့သော taxonomy ချမှတ်ရန်လိုအပ်တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်။2 တရားဝင်ဆေးပညာအဖွဲ့အစည်းကမွေးစားမပေးတောင်မှအခါ, ခွဲခြားစနစ်များကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့်အာမခံကုမ္ပဏီများကအသုံးပြုတဲ့မေးခွန်းသို့မဟုတ်ငွေတောင်းခံပုံစံများအတွက်မကြာခဏရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဗန်းစကားအတွက်သွယ်ဝိုက်ဖြစ်ကြသည်။
လိင်နှင့်သင်ျခြိုသုတေသနများအတွက်နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်း (ISSIR) ED ၏တရားဝင် taxonomy ချမှတ်စဉ်းစားအချို့သောနှစ်ပေါင်းရှိပါတယ်။ ကြောင်းအဆုံးဆီသို့တစ်ဦး Nomenclature ကော်မတီ, ဖွဲ့စည်းခဲ့နှင့်မကြာသေးမီကယင်း၏အကြံပြုခွဲခြားထုတ်ဝေခဲ့3 အတွက်အကျဉ်းချုံးသော စားပွဲတင် 1။ ကော်မတီအော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic ED အကြားခြားနားထိန်းသိမ်းထားဖို့ဖြစ်စေမအခြေအတင်ဆွေးနွေးသော်လည်း, အဆုံး၌သူတို့အကြံပြု taxonomy အတွက်၎င်း၏အဓိကဗဟိုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။4 ဤသည် nosology ဖဲကြိုးဖြတ် ISSIR အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆွေးနွေးသို့မဟုတ်မွေးစားရသေး; ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမ။ သို့သော်ထောက်ခံချက်များထုတ်ဝေအန္တရာယ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးထားပါတယ်။ အန္တရာယ်များတစ်ခုမှာ taxonomy ၏ဖြန့်ဝေဖြစ်ပါတယ် Ipsos စစ်မှန်သော ယင်း၏အသုံးပြုမှုအားပေးနှင့်အော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic ED အကြားဆက်လက်ဂုဏ်ထူးအပါအဝင်ယင်း၏ features နဲ့ဝေါဟာရများ၏တရားဝင်ထောက်ခံချက်, အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အခွင့်အလမ်းများရရှိ (နှင့်ဖြစ်ကောင်းကော်မတီများကမျှော်လင့်ထား) ၏တစ်ဦးကအဆိုပြုထား taxonomy နှင့်အတူအချို့သောပြဿနာများအပေါ်သို့ထပ်မံရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ (ထိုဦးတည်ချက်အတွက်တစ်ဦးခြေလှမ်းကတော့ ISSIR ၏လတ်တလောအစည်းအဝေးတွင် taxonomic ကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးစာတမ်းဖတ်ပွဲစဉ်အတွင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။5)
ဇယား ၁ - ခွန်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း၏ Nomenclature Committee မှအကြံပြုသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။
ဤသို့မဟုတ်အခြား ED အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းစနစ်ကိုတရားဝင်မဲဖြင့်သို့မဟုတ်ထုံးစံအရသတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ၊ 'psychogenic' ED အမျိုးအစားကိုပြas္ဌာန်းခြင်းမပြုမီ၊ ထို့ကြောင့်အော်ဂဲနစ် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားမှုနှင့်အတူ ပိုမို၍ အသေးစိတ်လေ့လာသင့်သည်။ ဤပြproblemsနာများအနက် 'psychogenic' ED (a) အမျိုးအစားသည်စိတ် - ခန္ဓာကိုယ်ခွဲခြားမှုကိုခေတ်မစားသောအမြင်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ (ခ) 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ' ရောဂါ၏နဗ်ကြောဆိုင်ရာဗေဒ၏ဗဟုသုတကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၊ psychosomatic, '()) မကြာခဏဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ရောဂါဖြစ်တယ်, (င) ကသူ့ ED' စိတ်ထဲမှာအားလုံး '' ကြောင်းလူနာအားဆိုလိုပေမည်
psychogenic ED ၏အယူအဆနှင့်အတူပြဿနာများ
(က) 'Psychogenic' ED သည်စိတ် - ခန္ဓာကိုယ်ခွဲခြားမှုကိုခေတ်မမီတော့သောအမြင်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်
အော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic ED အကြားခြားနားခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုအကြားသမိုင်းဝင်ဌာနခွဲ, ခေတ်သစ်ဇီဝကမ္မသုတေသနမလုံလောက်အကောင့်ယူသောသူအပေါင်းတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များတစ် somatic အခြေခံရှိသည်သော axiom တခွားစီဖွစျသညျတစ်ဌာနခွဲထင်ဟပ်။ ဒါဟာဒါခေါ်စိတ်ထဲ-ခန္ဓာကိုယ်ပြဿနာများ၏အတွေးအခေါ်သမိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့မလိုအပ်တဲ့နှင့်ဤစာတမ်း၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းနောက်လိုက်နှစ်ခုစခန်းများ idealize နိုငျကွောငျးပွောဆိုဖို့ကလောက်။ တဦးတည်းစခန်းစိတ်တော်ကြောင်းယုံကြည်သူတင်းကျပ် reductionists, ပါဝင်သည် ဘာမျှပေမယ့် အလုပ်မှာဦးနှောက်, သောသူအပေါင်းတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်၏စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသတည်း။ သူတို့ရဲ့အမြင်အတွက် Venn ပုံထဲမှာခံပြီးဖြစ်ပါတယ် ပုံ 1a။ ဤအမြင်၏ဥပမာတစ်ခုမှာ - 'သတိသည်အခြားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဇီဝဗေဒသဘောတရားမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်နှင့်၎င်းကို neurobiologically စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အသိစိတ်သည် neurobiological ဖြစ်စဉ်များကြောင့်ဖြစ်ရပြီး ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင်တွေ့ရသည်။6,7 အခြားသူများကစိတ်ထဲကြောင်းယုံကြည် ပိုပြီးတစ်ခုခု ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်လုံးဝရှင်းပြလို့မရနိုင်တဲ့ 'ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်များ' ဆိုတာဟာအလုပ်မှာရှိသည့် ဦး နှောက်ထက်ဖြစ်သည်။ ဒီအမြင်ထဲမှာပုံဖော်ထားသည် ပုံ 1b။ ဒါပေမယ့်ငါ့ပညာအတတ်, ရှိသမျှစိတ်ကိုလုံးလုံးအရာတစ်ခုခုမပေးကြောင်းသဘောတူ အခြား ဦးနှောက် function ကိုထက်; သည်, သူတို့ကပယ်ချ ပုံ 1c အလားအလာ option ကိုအဖြစ်။ မရေမတွက်နိုင်သောစမ်းသပ်စိတ်ပညာရှင်, ဘာသာဗေဒ, မနုဿဗေဒပညာရှင်နှင့်အခြားအပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်များအသေးစိတ်ဦးနှောက် function ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဒါပေမဲ့သူတို့မည်သို့ပင်ဆိုစေသဘောတူဖွယ်ရှိပါလိမ့်မယ် အားလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမရှိနိုင်သည်ကိုအောက်ပါအတိုင်း psychogenic ပါဝင်ပါဘူးကြောင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှု အော်ဂဲနစ် ဖြစ်စဉ်များ။ “ စိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးပါ” သော ED မရှိပါ။ (အောက်ကပုဒ်မ (င) တွင်ကြည့်ပါ။ ) ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်စိုက်ထူခြင်းနှင့်စိုက်ထူခြင်းကိုတားဆီးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။8,9,10,11 ဦး နှောက်၏ဖြစ်စဉ်များကိုစေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်းမှတစ်ပါးမှတစ်ပါး 'psychogenic' စိုက်ထူမှုနှင့် 'psychogenic' ED မဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။
စိတ်နှင့်ကိုယ်ထည်အကြားဆက်ဆံရေးသုံးခုစံပြအမြင်များ၏ Venn ကားချပ်။ (a) တင်းကြပ်သော reductionists ၏ကြည့်ရန်: အားလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်၏စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ (b) အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်စဉ်ကိုအမြင်: အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များဦးနှောက် function ကို၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့်အပြည့်အဝမရှင်းပြဖြစ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ (ဂ) လွတ်လပ်ရေးအမြင် (ကတရားမဝင်သောအစုံ?): စိတ်ကိုဦးနှောက် function ကိုထက်လုံးဝမကအခြားအရာတစ်ခုခုသည်။
(ခ) 'Psychogenic' ED သည် 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ' မသန်မစွမ်းမှုများ၏ neurobiology အသိပညာကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်း
'Psychogenic' ED ၏အမျိုးအစားခွဲများသည် Nomenclature Committee ၏ taxonomy တွင် 'psychogenic' ကို ED အမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်ငြင်းပယ်ခြင်းအတွက်ဤဥပမာကိုနမူနာပြနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် 'အဓိကဘဝစိတ်ဖိစီးမှု' စသည့် 'အနုတ်လက္ခဏာစိတ်အခြေအနေများ' ကိုအခြေအနေအခြေအနေ ED အမျိုးအစားများအဖြစ်ထည့်သွင်းထားပြီး 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းသို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ ' သို့သော်နဗ်ကြောပညာရပ်သည်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာရောဂါများ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာအခြေခံများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရာတွင်များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။12,13 အမှန်စင်စစ်စိတ်ကျရောဂါ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကမကြာသေးမီကသုတေသနပြုအများဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဦးနှောက်အတွက်အဓိက neurochemical နှင့် neuroendocrine အပြောင်းအလဲများကိုသရုပ်ပြခဲ့သောများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအကြားရှိပါတယ်။14,15,16,17,18 ဤပြောင်းလဲမှုများအချို့သည်ချို့ယွင်း erectile function ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။ (Revealingly, Lue19 စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါတို့ကို ED ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်သော်လည်း၎င်းသည်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အားအခြေခံရောဂါဗေဒ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ထုတ်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏အော်ဂဲနစ်သဘောသဘာဝကိုပြသသည်။ ) ထို့အပြင်ဤအာရုံကြောဓာတုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများသည်ဤဆိုးကျိုးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ဆေးဝါးကုသမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် '' အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကဤကုသမှုများသည်တစ်ခါတစ်ရံဤအခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်သော ED ကိုလျှော့ချပေးသည်၊ သို့သော်အခြားကိစ္စများတွင်ဆေးများသည်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဟန်ချက်ကိုပြောင်းလဲပေးသည်၊ ED၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊20 တစ်နည်းအားဖြင့် 'psychogenic' ED သည် ဦး နှောက်အား neurogenic 'ED ဟုရှုမြင်သောအခါ၊ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးများသည် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဤ neurogenic ED ကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင်တော့ neuroendocrine နှင့် neurochemical အခြေနေတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဆင်းမှုတို့ကြောင့် ED ရဲ့အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများဟာ hypogonadism (သို့) hyperprolactinemia ကြောင့် ED ထက်များတယ်။
'psychogenic' ED နှင့်အတူဤပြproblemနာကိုလည်း 'လိင်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွနိုင်မှုအတွက်အိုမင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကျဆင်းမှု' ၏ဤအမျိုးအစားတွင်ကော်မတီကပါဝင်မှုအားဖြင့်သာဓကဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများအသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကျဆင်းလာပြီးအကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။21,22,23 ထို့ကြောင့်အသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော erectile function ကိုကျဆင်းခြင်းလိင်တံ၏သွေးကြောစနစ် (သို့) penile collagen သို့မဟုတ် peripheral အာရုံကြောများမှဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသောပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး၎င်းတို့အား 'psychogenic' အစား 'အော်ဂဲနစ်' အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ED ၏အသက်အရွယ် -related အကြောင်းတရားများ။ သို့သော်ဤပြောင်းလဲမှုအချို့သည်အရသာနှင့်အနံ့ထိခိုက်လွယ်မှုသို့မဟုတ်အစာခြေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလျှော့ချခြင်းကဲ့သို့သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုနှိုးဆွပေးသောအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောကျဆင်းမှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။24,25 အသက်အရွယ်နှင့်အတူလိင်စိတ်နိုးထ၏ဆုံးရှုံးမှု၏အချို့ကိုလည်းဦးနှောက်ထဲမှာအသက်အရွယ်-related neurochemical အပြောင်းအလဲများကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဤအပြောင်းအလဲများနှင့်ပညာရေးအပေါ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးသက်ရောက်မှုများသေးကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်နားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်သုတေသနထိုက်တန်ကြသည်မဟုတ်။
psychogenic နှင့်အော်ဂဲနစ် ED အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဂုဏ်ထူးထိန်းသိမ်းခြင်း၏အခက်အခဲယောဟနျသ Bancroft နှင့်အဲ Janssen အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလည်းထင်ရှားပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်ဗဟို inhibitory ဖြစ်စဉ်များသူတို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်သူတို့အားဖြစ်စဉ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်သူတို့ရဲ့သီအိုရီပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းပါ,26,27 Bancroft နှင့် Jannsen28 လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်သုံးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုနှင့်စာရင်းအင်းအချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို သုံး၍ အတော်အတန်လွတ်လပ်သောနောက်ခံဖြစ်စဉ်သုံးခု၊ သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများကိုတစ်ခုမှာခွင့်ရှိသည် '' ဖြစ်ပါတယ်Psychogenic ဆေးဝါးကုထုံး၏ခေတ်တွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - သီအိုရီဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု '(အလေးပေးထည့်သွင်းထားသည်)၊ သို့သော် Bancroft နှင့် Janssen တို့သည်သူတို့၏လေ့လာမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မစည်းမျဉ်းကိုရည်ညွှန်း။ ဤမေးခွန်းကိုတင်ပြကြသည် (စ ၈၆) ။ လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားများအရ၎င်းသည် 'psychogenic ED' ၏အယူအဆကိုကျွန်ုပ်တို့အားဘာပြောမည်နည်း။ 'psychogenic' နှင့်အော်ဂဲနစ် 'ကိုခွဲခြားခြင်းသည်လက်တွေ့တန်ဖိုးကျဆင်းလာသည်။ များသောအားဖြင့် 'ရောနှော' သောရောဂါလက္ခဏာပြသည်။ Bancroft နှင့် Janssen တို့သည်ခွဲခြားမှုကိုပယ်ဖျက်မည့်အစားတစ်ဖက်တွင်ဗဟိုနှင့်အရံပစ္စည်းအော်ဂဲနစ်တားစီးမှုများအကြားခဏမျှမျှတမှုနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင် 'ပြင်ပပြproblemsနာများ' သည်အမျိုးသားတစ် ဦး သည်လိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုတွင် ED ရှိခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်ကိုအကြံပြုသည်။ ကြုံတွေ့ရသည်။ သို့တိုင် Bancroft နှင့် Janssen တို့သည်ပြင်ပပြproblemsနာများအားဖြေရှင်းခြင်း၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒကိုသတိပြုမိသည်။ 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုဗဟိုတားဆီးရန်အတော်လေးမြင့်မားသောအမျိုးသားများသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (သို့) စိတ်ပူပန်လျှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများနှင့်တုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်မှုများကိုပိုမိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲအပေါ်အဓိကမူတည်သည်မဟုတ်ဘဲစိတ်နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဦး နှောက်အတွင်းရှိဆက်စပ်ဇီဝဓါတုဗေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ' (စ။ ၈၇) သို့သော်ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များကိုအော်ဂဲနစ်ဆိုင်ရာအချက်များကထိန်းချုပ်ထားပါက၊ ထို့အပြင်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲသည်ပါ ၀ င်သည့်တိုင်ထိုအပြောင်းအလဲသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံကြောဓာတုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဇီဝဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပဲသိမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များထက်လျော့နည်းစေသည်။
(ဂ) 'Psychogenic' ED သည် 'psychosomatic' ၏အခြေခံအဓိပ္ပာယ်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုပါ
psychosomatics များ၏ကောင်းမွန်စွာထူထောင်လယ်ပြင်ပြီးသားကိုဒီမှာဝေဖန်ထားသည်ကစိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြားတူညီတဲ့ပေါရာဏဂုဏ်ထူး embody မှ၎င်း၏နာမတျော၏အလွန်အမြစ်များအတွက်ယ့်ပုံပဲ။ သို့သော် psychosomatics အတွက် Venn ကားချပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြည့်ရှုအားပေးသောအခါ ပုံ 1a သို့မဟုတ်ခထို့နောက်၎င်းသည် ဦး နှောက်၏သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလုပ်ငန်းများနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါတို့တွင်ပါဝင်သောအခြားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်များအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏သိပ္ပံပညာအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား interaction ကဆိုလိုသည်မှာ psychosomatics ၏မကြာသေးမီကတည်ထောင်ထားသော subdisciplines နှစ်ခုမှ epitomized နေကြသည်။ psychoneuroendocrinology နှင့် psychoneuroimmunology နှင့်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်များ, Psychoneuroendocrinology နှင့် ဦးနှောက်, အပြုအမူ, နဲ့ Immunization ။ ဤရွေ့ကားစည်းကမ်းများကိုသူတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏စနစ်တကျအပြန်အလှန်ထက်သူတို့ရဲ့ခွဲခြာအလေးပေး။ အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကို ခွဲခြား၍ မရသောသီးခြား pigeonholes ကဲ့သို့သော Erectile function နှင့် disfunction ၏အော်ဂဲနစ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဤအမြင်သည်အက်ဒ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၁၉၆၁ အမေရိကန်နဗ်ကြောဆိုင်ရာအစည်းအရုံးအစည်းအဝေးတွင်သမ္မတ၏မိန့်ခွန်းတွင် HG Wolff ပြောခဲ့သည့်ယေဘူယျဖော်ပြချက် - 'သီးခြားရောဂါအမျိုးအစားကိုတည်ထောင်ခြင်းသည်အကျိုးမရှိ၊ လူသား၏အာရုံကြောစနစ်သည်ရောဂါအမျိုးအစားအားလုံးတွင်ပါဝင်သည်။ '29
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Somatic အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားသောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုမှာအော်ဂဲနစ်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်စုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Bancroft နှင့် Janssen တို့သတိထားမိသည့်အတိုင်း erectile function တွင်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါချို့ယွင်းမှုများသည်နာတာရှည် (ဥပမာသွေးကြောဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ အရံအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါ) သို့မဟုတ်စူးရှသော (အရက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း) အခြေအနေများစွာမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်ဤနူးညံ့သောချို့ယွင်းချက်ကိုစိုးရိမ်မိပါကနောက်ထပ်လိုငွေပြမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအနည်းငယ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေသိမြင်တုံ့ပြန်ချက်နောက်ထပ် erectile function ကိုအယှက်မှအခြားအခွအေနေ (s) နှင့်အတူအကျဉ်းချုပ်စေခြင်းငှါ, 'စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်' ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ Performance စိုးရိမ်စိတ်သည်အခြားသောစိုးရိမ်မှုများကဲ့သို့ပင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုအတွက်ရှင်းလင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိခဲ့သည့်အတိုင်းစိုးရိမ်စိတ်သည်လည်းအော်ဂဲနစ် / ဇီဝကမ္မအခြေအနေနှင့်လည်း anxiolytic မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်ကုသနိုင်သည်။ အချို့သောဆေးများဖြင့်ဤဆေးအချို့သည် ED ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်တုံ့ပြန်မှုကိုပြတ်တောက်စေနိုင်သည်။ အမှန်မှာအရက်ပမာဏနည်းနည်းသောက်ခြင်းသည်ရိုးရာရိုးရာဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ လိင်အစာစားချင်စိတ်ကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် Erectile function ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ (ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဆေးများအပေါ်အများဆုံးကိုးကားနိုင်သည့်အခွင့်အာဏာမှာမှတ်ချက်ပေးသူ William Shakespeare ဖြစ်နိုင်သည် (Macbeth Act II, Scene 2), ထိုအရက် '' အလိုဆန္ဒလှုံ့ဆျောပေမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ပယ်ရှား။ ')
မျှော်လင့်ချက်များ erectile function ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်မည်သို့အကောင်းဆုံးဥပမာ Cranston-Cuebas ကလေ့လာမှုကနေကြွလာ et al ။30 သူတို့က, စိုက်ထူမြှင့်တင်ရန်စိုက်ထူအယှက်မှ, ဒါမှမဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြစ် purported သုံးရလဒ်များအရအိပ်ယာဆေးပြားများ၏တစ်ဦးချင်းစီယူပြီးပြီးနောက် erotica ကြည့်ရှုလိင်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အလုပ်မဖြစ်ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါသကဲ့သို့, အလုပ်မဖြစ်လူတို့သညျစွပ်စွဲ impairing မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူအပြောင်စိုက်ထူခဲ့သညျ။ အံ့သြစရာကောင်းတာကလိင်အလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားအမှန်တကယ်ထင်ဝေဖန်ထားခြင်း, တစ်ပြောင်းပြန်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအားကောင်းစိုက်ထူခဲ့သညျ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ function ကိုသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဗဟို excitatory နှင့် inhibitory ပြည်နယ်များ, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းများ, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံ၏ချက်ချင်းအခြေအနေများအပါအဝင်ယောက်ျား၏အခြားရှုထောင့်, အညီကွဲပြားခြားနားသည်အဘယ်မှာရှိအခွအေနေ erectile (dys) function ကို၏နမူနာအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။
()) 'Psychogenic' ED ကိုမကြာခဏဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသည်
အကောင်းဆုံးကတော့, ED ၏အကြောင်းတရားများ၏ရောဂါဟာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သမိုင်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးသောအောက်ရှိခွအေနမြေားတည်ထောင်ရန်, ဖြစ်နိုင်သည်စံချိန်စံညွှန်းမီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအပါအဝင်စေ့စေ့စပ်စပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲနှင့်ကျယ်ပြန့်အင်တာဗျူးပါဝင်သည်။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်မှာပြတ်သားဖြစ်စဉ်းစားခဲ့သည့် nocturnal penile tumescence, ဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်း-related စိုက်ထူ (SRE) အတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု, ပါဝင်နိုင်သည်။31,32 SRE ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အော်ဂဲနစ်ရောဂါဗေဒမရှိသက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်လျှင်, ထို့နောက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံစဉ်အတွင်းစိုက်ထူကာကွယ်တားဆီးဖို့အဘယ်သူမျှမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိကွောငျးယူဆနှင့် psychogenic ED တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဖွယ်ရှိခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုဖယ်ခြင်းဖြင့်ရောဂါအဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက်။
စိတ်ကျရောဂါများကဲ့သို့အခြေအနေများသူတို့ကိုယ်သူတို့ SRE အယှက်နိုငျသောကွောငျ့ဒီနိဂုံးချုပ်၏စိတ်မချရကောင်းစွာနဲ့အခြားအကြောင်းပြချက်များအကြား, မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။33,34 ထို့အပြင်တိရိစ္ဆာန်များတွင် SRE ၏ ဦး နှောက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်သုတေသနပြုချက်အရ SRE ကိုဖျန်ဖြေပေးသည့် ဦး နှောက်someရိယာအချို့သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုကာလအတွင်းစိုက်ထူခြင်းကိုထိန်းညှိသူများနှင့်ကွဲပြားသည်။ အထူးသဖြင့် REM အိပ်စက်ခြင်းကိုမထိခိုက်စေဘဲကြွက်များ၏ hypothalamus ၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက် preoptic inရိယာ၌တွေ့ရှိရပါသည် se နှုန်းနှင့်အခြားမည်သည့်အခြေအနေတွင်စိုက်ထူထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ။35 ဒီဥပမာရုံတစျခုအများသောစိုက်ထူ၏အာရုံကြောနှင့် endocrine ဖျန်ဖြေခြင်းဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွလိင်အင်္ဂါထိတွေ့, သုတ်ရည်ထိ, ထိုကဲ့သို့သောအနံ့သို့မဟုတ်မျက်မှောက်အဖြစ်ဝေးလံခေါင်သီဆွဖို့တုန့်ပြန်, ဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်းဆက်စပ်ရှိမရှိအပေါ်မူတည်, တယောက်ကိုတယောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်ထံမှမတူကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။11 ထိုကွောငျ့, တဦးတည်းအခြေအနေတွင်စိုက်ထူ၏အော်ဂဲနစ်အခြေခံအတွက်မမှန်သို့မဟုတ်အခြားအခြေအနေတွင်ပညာရေး၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မကျမည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
(င) 'Psychogenic' ED သည် 'စိတ်ထဲတွင်အားလုံး' မဟုတ်ပါ
ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူထုသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့် 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ' ပြproblemsနာများကိုကွဲပြားခြားနားစွာရှုမြင်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများနှင့်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောခြွင်းချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ တိုက်ဆိုင်စွာဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ၊ အာမခံလုပ်ငန်းနှင့်အစိုးရသည်ပြ'နာနှစ်ခုကိုလွှမ်းခြုံမှုနှင့်လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာဆက်ဆံကြသည်။ 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ' ပြcommonlyနာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်မပါ ၀ င်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ပါကဆရာဝန်ထံသွားလည်ပတ်ခွင့်နည်းပြီးသူတို့အတွက်ပိုက်ဆံနည်းပါးသည်။ ဤလူမှုရေးနောက်ခံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်ဆိုင်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြallနာများသည်မကြာခဏ“ စိတ်ထဲတွင်ရှိသမျှ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရခြင်းကြောင့်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းခံရခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ psychogenic ED ၏ရောဂါရှာဖွေမှုသည် 'သင်၏စိတ်ထဲတွင်အားလုံးရှိသည်' ဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ရန် ရည်ရွယ်၍ မရပါကပင်လူနာသည်ထိုယူဆချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးထိုဆရာဝန်ကယုံကြည်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် 'ခွန်အားကြီးခြင်း' ဟူသောသွင်ပြင်လက္ခဏာကိုရှောင်ရှားရန် 'erectile dysfunction' ဟူသောဝေါဟာရကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံခဲ့ကြသည်။ (သို့သော်သတိပြုရန်မှာ 'ခွန်အားမရှိခြင်း' သည်ဤဂျာနယ်နှင့်၎င်း၏မိခင်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အမည်တွင်တည်ရှိနေသည်။ ) ဤရောဂါလက္ခဏာပြသူများအတွက် 'psychogenic ED' သည် 'psychogenic impotence' ထက်ပြproblemနာ နည်း၍ ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရမည့်အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်သည် '' ယခုအခါနာတာရှည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သော ED ဟုခေါ်သည့်အရာအတွက်အော်ဂဲနစ်အခြေခံရှိကြောင်းဆရာဝန်များကနားလည်သဘောပေါက်လာပါကဆက်နွယ်သည့်အမည်းစက်ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးကုသမှုကိုအာမခံဖြင့်ပိုမိုအလွယ်တကူဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ ရလဒ်တစ်ခုမှာအမျိုးသားများသည်ဆေးကုသမှုခံယူရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိနိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ လက်ရှိရရှိနိုင်သောဆေးအချို့သည်အခြေအနေနှင့်အော်ဂဲနစ်မြောက်မြားစွာသော ED နှင့်အတူထိရောက်မှုရှိပုံရသည်။ သို့သျောလညျးအခွအေနေ ED များအတွက်ထိရောက်သောဆေးကုသမှုများရရှိမှုပြotherနာကို psychotherapeutic ချဉ်းကပ်မှု၏အသုံးဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်ငြင်းခုံပါဘူး။ အချို့သော 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ' အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးသည်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသော ဦး နှောက်ဇီဝကမ္မဗေဒကိုပြောင်းလဲစေသောအထောက်အထားများရှိသည်။36 ထို့အပြင် ED အတွက်ထိရောက်သော 'ပြောသောကုထုံး' သည်အခြေခံဇီဝကမ္မဗေဒကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။
ED တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ taxonomy
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ED မရှိ taxonomy တချို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများခွဲခြားသို့မဟုတ်ငှက်တို့သည်သို့မဟုတ်သစ်ပင်မျိုးစိတ်ဖော်ထုတ်ဘို့မရရှိနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်-အုပ်ချုပ်မှုကိုအကိုင်း၏ကြင်နာအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး စားပွဲတင်2ဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောစိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းပေးသော ISIR ကော်မတီ၏အကြံပြုသည့် taxonomy နှင့်၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ ဝေါဟာရများနှင့်ပြproblemsနာများလည်းရှိနေသည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုတင်ပြထားသည်။ ဒီခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်မှာအော်ဂဲနစ် ED ကို ဦး နှောက်နှင့်ကျောရိုးအစရှိသည့်အပြင်ဘက်သို့မဟုတ်ဗဟိုပြproblemsနာများအတွက်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဗဟိုပြproblemsနာများတွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာနှင့် endocrine စစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိရမည့်ပြthoseနာများသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောအခြေအနေများလည်းပါ ၀ င်သည်။ အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောအရံရောဂါများကိုဖယ်ရှားလိုက်သောအခါအိုမင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များလည်းဤတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဤနည်းစနစ်သည်အစရှိသည့် endocrine ပြproblemsနာများ၊ ဥပမာအားဖြင့်မူလ hypogonadism သို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါတစ်ရှူးများ၌ androgen-receptor မခံစားနိုင်မှုတို့ကိုခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဦး နှောက်မှ gonadotrophin-releasing hormone သို့မဟုတ် ဦး နှောက်တွင်ဟော်မုန်းဇီဝကမ္မပြproblemsနာများ။ Situational ED သည်အချို့သောမိတ်ဖက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်များ၊ သို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်နေသောစွမ်းဆောင်ရည်များလိုအပ်သောအခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုသဘောဆောင်သော ED ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည်။ အခြားအခြေအနေများမှာပြproblemနာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဇယား ၂ - erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အချိုးအစားအရအော်ဂဲနစ် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားမှုကင်းသည်။
ဒီ taxonomy အတွက်သွယ်ဝိုက်သည်အခြားအခင်းအကျင်းအတွက်စိုက်ထူ impairing စဉ်အချို့အော်ဂဲနစ်မမှန်အိပ်ပျော်ခြင်း-related စိုက်ထူခွင့်ပြုစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုထား taxonomy နှင့်အတူပြဿနာများတစ်ခုမှာကြောင့် (အော်ဂဲနစ်သိသာ dichotomies ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း vs အရံ, အခွအေနေ vs အလယ်ပိုင်း) ။ situational ED ကိုအော်ဂဲနစ် ED မှခွဲထုတ်ခြင်းသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (ဥပမာ anxiolytics) သို့မဟုတ်လိင်တံအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ကုသနိုင်သောအခြေအနေတွင် ED အတွက်ရှင်းလင်းသောအော်ဂဲနစ်အခြေခံမရှိကြောင်းညွှန်ပြခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ။ မရသင့်ပါ။ NO synthase inhibitors) ။ ဤအမျိုးအစားကို ပို၍ အဖြစ်အပျက်များသော ED အဖြစ်အပျက်များကန့်သတ်ထားခြင်းမှာ CNS ၏နာတာရှည်ရောဂါဗေဒသည်အော်ဂဲနစ် ED အောက်တွင်ခွဲခြားရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းမရှိဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုစံပြအတန်းများအဖြစ်ရှုမြင်သင့်သည်။ လက်တွေ့တွင်ရောဂါဗေဒအများစုတွင်ဗဟိုနှင့်အရံပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ၎င်းအချက်များဖော်ပြချက်သည်အမျိုးသားတစ် ဦး ၏မိတ်ဖက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတို့ကြောင့်များသောအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သေခြင်းအကြောင်းရင်းများကိုသေခြင်းအကြောင်းရင်းများကို ဦး စားပေးသတ်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ED ၏အကြောင်းရင်းများကိုရှာဖွေခြင်းသည် ဦး စားပေးသတ်မှတ်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်နိုင်သည်။
အခြေအနေနှင့်အော်ဂဲနစ် ED ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတမန်တော်အမှန်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတွေ့ရမယ်။ သို့သျောလညျး, တကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်အော်ဂဲနစ်အကြောင်းမရှိသက်သေပြမဟုတ်ပါဘူးပင်အခါ, မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသို့ထားတဲ့အော်ဂဲနစ်ရောဂါပျောက်ကင်းရှိစေခြင်းငှါစိတ်ကိုထားရပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, acetylsalicylic အက်ဆစ် (Aspirin ကို) Prostaglands လုပ်လိုက်တာအပေါ်အော်ဂဲနစ်အရေးယူနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်ထိရောက်စွာရှည်လျားမတိုင်မီခေါင်းကိုက်ကုသ။ ဒါဟာအခြားဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, အမည်ရလျင်မြန် (အချိန်မတန်မီ) သုတ်ရည်လွှတ်၏ကုသမှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုစဉ်းစားရန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီကတိုင်အောင်, ဤပြဿနာကိုများသောအားဖြင့် psychogenic မူရင်းဖြစ်ဖို့ယူဆခဲ့ပါတယ်, လူသာမန်ကုသမှုအားလုံးမှာကိုကမ်းလှမ်းခဲ့လျှင်အခွအေနေ-ဆက်ဆံဖို့ psychotherapy များအတွက်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ သို့သျောယခု serotonergic သို့မဟုတ် antiadrenergic မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကုသမှုအများအပြားထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အကူအညီပေးသည်,37,38 ဒီ 'psychogenic' ပြproblemနာ၏အော်ဂဲနစ်ဖျန်ဖြေ၏သက်သေအထောက်အထားပေးခြင်း။ အနာဂတ်သုတေသနသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်နာတာရှည်ဓာတုဗေဒနှင့်ပတ်သက်သောနာတာရှည်ဓာတုဗေဒနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသားများနှင့်မကြာခဏအခြေအနေအခြေအနေ ED နှင့်အမျိုးသားများသည်ကြာရှည်သုက်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်းအတွက်အာရုံကြောဓာတုဗေဒ (ထုတ်လွှင့်သည့်အဆင့်၊ receptor သိပ်သည်းဆ / sensitivity) အပြင်ဘက်တွင်အိပ်ရန်လေ့ရှိသည်ဟုယူဆလိမ့်မည်။ ဤအလုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းညှိသောသူတို့အား ဦး နှောက်ဒေသများ၏, etc ။ ) 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှု၏နာတာရှည်ရောဂါ' ပင် ဦး နှောက်၏ဓာတုဗေဒတွင်အမြစ်တွယ်နေနိုင်သည် - အချို့သောမျိုးစိတ်များတွင် oxytocin နှင့် vasopressin ဟော်မုန်းများအပြင်၎င်းဟော်မုန်းများဖော်ပြမှုကိုထိန်းချုပ်သောမျိုးရိုးဗီဇများသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တွဲဆက်ထားသောနှောင်ကြိုးများဖြစ်ပေါ်ရန်ထိန်းညှိပေးသည်။39 သေချာဖြစ်စေရန်, pair တစုံဘွန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးကဲ့သို့တူညီသောအရာမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့ neurochemical ကွဲပြားခြားနားမှုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးများအတွက်စွမ်းရည်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုဖျန်ဖြေကြောင့်မျှော်လင့်ထားရန်လုံလောက်သော related နေကြသည်။
ဤနေရာတွင်အဆိုပြုထားအဖြစ်, အော်ဂဲနစ် ED ရန်အမျိုးအစားအပြိုင်အဖြစ်အခွအေနေ ED ချမှတ်တပါးအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုတောင်အခွအေနေ ED အော်ဂဲနစ်အချက်များကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အော်ဂဲနစ် ED ED တစ် supercategory အဖြစ်စွန့်ပစ်ရပါမည်; ထို့နောက်အခွအေနေ ED, ED ၏တတိယအမျိုးအစားအဖြစ်ခွဲခြားရံနှင့်ဗဟိုပညာရေးနှင့်အပြိုင်, သို့မဟုတ် Central ED တစ်ပဉ္စမအမျိုးအစားအဖြစ်နိုငျသညျ။ ဤအအခြားနည်းလမ်းမဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် nonmental အော်ဂဲနစ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မမှန်အကြားမိစ္ဆာဂုဏ်ထူးစေသည်ရာ psychogenic နှင့်အော်ဂဲနစ် ED အကြားလက်ရှိဌာနခွဲ, ထိန်းသိမ်းခြင်းမှပိုကောင်းတယ်ပုံရသည်။ ဒါဟာဂုဏ်ထူး ED ၏ taxonomy ကနေ, ဒါပေမယ့်လည်းစိုက်ထူ၏အကြောင်းတရားများနှင့်၎င်း၏ရောဂါအကြောင်းကိုစနစ်တကျစဉ်းစားတွေးခေါ်မှမဟုတ်ပဲ, စွန့်ပစ်ရပါမည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ, 4th edn (DSM-IV) ။ American Psychiatric Association: ဝါရှင်တန်ဒီစီ, 1994 ။
Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ သမား (eds) ။ Wolff ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အခြားဌာနမှူးနာကျင်မှု, 7th edn ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း: နယူးယောက်, 2001 ။
Lizza EF, Rosen RC ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ခွဲခြား: ခွန်အားမရှိသုတေသနအတွက်နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ Nomenclature ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာ။ Int J Impot Res 1999; 11: 141-143 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
ရို RC, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေး, အောက်တိုဘာလ 2000 ။
Erectile အလုပ်မဖြစ်၏ taxonomy အပေါ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ။ သင်ျခြိုသုတေသနပါ့အပေါ် 9th ကမ္ဘာ့ဖလားအစည်းအဝေးသြစတြေးလျ။ နိုဝင်ဘာလ 26-30, 2000 ။
Searle JR ။ သတိ။ Annu ဗြာ Neurosci 2000; 23: 557-578 ။ | ဆောင်းပါး |
Stuss DT, Levine B. အရွယ်ရောက်ပြီးသူအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပညာဗေဒ - တိုကျရိုကျသောအမြှေးမြားကိုလေ့လာခွငျးမှသင်ခန်းစာများ။ Annu ဗြာ Psychol 2002; 53: 401-433 ။ | ဆောင်းပါး |
ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု Bancroft ဂျေဗဟိုတားစီး: တစ်သီအိုရီရှုထောင့်။ neuroscience Biobehav ဗြာ 1999; 23: 321-330 ။
Giuliano က F, penile စိုက်ထူ၏ Rampin O. ဗဟိုအာရုံကြောစည်းမျဉ်း။ Neurosci Biobehav Rev 2000; 24: 517-533 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Heaton JPW ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ဗဟို neuropharmacological အေးဂျင့်များနှင့်ယန္တရားများ: dopamine ၏အခန်းကဏ္.ကို။ Neurosci Biobehav Rev 2000; 24: 561-569 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Sachs bd ။ ဆက်စပ်ချဉ်းကပ် erectile function ကို, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆော်ခြင်း၏ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ခွဲခြားဖို့ချဉ်းကပ်။ Neurosci Biobehav Rev 2000; 24: 541-560 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Davidson RJ၊ Abercrombie H၊ Nitschke JB, Putnam K. ဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာရောဂါများ။ Curr Opin Neurobiol 1999; 9: 228-234 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Cowan WM, Harter DH, Kandel ER ။ ခေတ်သစ်အာရုံကြောသိပ္ပံပေါ်ပေါက်လာခြင်း - အာရုံကြောနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက်အချို့သောသက်ရောက်မှုများ။ Annu ဗြာ Neurosci 2000; 23: 343-391 ။ | ဆောင်းပါး |
Davidson RJ, Pizzagalli: D, Nitschke JB, Putnam K. စိတ်ကျရောဂါ: ထိခိုက်အာရုံကြောသိပ္ပံကနေအမြင်များ။ Annu ဗြာ Psychol 2002; 53: 545-574 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Grasby pm တွင်။ စိတ်ကျရောဂါအတွက် imaging မဟာဗျူဟာများ။ J ကို Psychopharmacol 1999; 13: 346-351 ။
McEwen BS ။ စိတ်ဖိစီးမှု၏ neurobiology: serendipity ကနေလက်တွေ့ဆက်စပ်မှုရန်။ Brain Res 2000; 886: 172-189 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Ninan PT ။ အဆိုပါအလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ, အာရုံကြောဓာတုဗေဒနှင့်စိုးရိမ်စိတ်များ၏ဆေးဝါးဗေဒ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1999; 60 (ပျော့ပျောင်း 22): 12-17 ။ | PubMed | ChemPort |
Nutt DJ၊ Glue P၊ Lawson C. စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒ - အသစ်ပြောင်းခြင်း။ Prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1990; 14: 737-752 ။ | ဆောင်းပါး |
Lue TF ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ N Engl J ကို Med 2000; 342: 1802-1813 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Brock GB ကို, Lue TF ။ မူးယစ်ဆေး - သွေးဆောင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အသစ်ပြောင်းခြင်း မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး 1993; 8: 414-426 ။ | PubMed |
Rowland DL, Greenleaf WJ, Dorfman LJ, Davidson JM ။ လူအိုများတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း။ 1993 လိင် Behav Arch; 22: 545-557 ။ | PubMed |
Schiavi RC, Rehman ဂျေလိင်နှင့်အိုမင်း။ Urol Clin မြောက်အမေရိက Am 1995; 22: 711-726 ။
Wespes အီး Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Curr Opin Urol 2000; 10: 625-628 ။ | ဆောင်းပါး |
Stevens JC, ကာဣန WS ။ အိုမင်းအတွက်အရသာနှင့်အရသာအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ Crit ဗြာစားနပ်ရိက္ခာသိပ္ပံ Nutr 1993; 33: 27-37 ။
Rolls BJ ။ chemosensory အပြောင်းအလဲများသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါသလား Physiol Behav 1999၊ 66: 193-197 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု Bancroft ဂျေဗဟိုတားစီး: တစ်သီအိုရီရှုထောင့်။ Neurosci Biobehav Rev 1999; 23: 763-784 ။ | ဆောင်းပါး |
Bancroft J, Janssen E. အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏ dual- ထိန်းချုပ်မှုမော်ဒယ်: ဗဟိုကမကထပြုခဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုသီအိုရီချဉ်းကပ်မှု။ Neurosci Biobehav Rev 2000; 24: 571-579 ။ | ဆောင်းပါး |
Bancroft J ကို, pharmacotherapy ၏ခေတ်ထဲမှာ Janssen အီး Psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တစ်သီအိုရီချဉ်းကပ်နည်း။ ခုနှစ်တွင်: Mulcahy J ကို (ed) ။ အထီးလိင်အမည်: လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်။ Totowa, NJ: Humana စာနယ်ဇင်း, 2001, စစ 79-89 ။
Dalessio DJ ။ ဒေါက်တာ Harold G. အ Wolff ၏အမှတ်တရများ။ ခုနှစ်တွင်: Silberstein SD က, Lipton RB, Dalessio DJ သမား (eds) ။ Wolff ရဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အခြား ဦး ခေါင်းနာကျင်မှု, 7th Edition ကို။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း: နယူးယောက်, 2001, စစ 3-5 ။
Cranston-Cuebas MA, Barlow DH, Mitchell W, Athanasiou R. ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်အလုပ်မဖြစ်သောယောက်ျားများအပေါ်မှားယွင်းစွာတွက်ချက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Abnorm Psychol 1993; 102: 525-533 ။ | ဆောင်းပါး |
Bancroft J ကို, Malone N. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏လက်တွေ့အကဲဖြတ်: တစ် nocturnal penile tumescence ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် intracavernosal ထိုး။ int J ကိုသင်ျခြို Res 1995; 7: 123-130 ။
Broderick ဂျော်ဂျီယာ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သက်သေအထောက်အထားကိုအခြေခံပြီးအကဲဖြတ်။ Int J Impot Res 1998; 10 (ပျော့ပျောင်း 2): S64-S73 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Thase ME, Reynolds က CF, Jennings JR, ဖရန့် E ကို, Howell JR, Houck PR စနစ်, Berman က S, Kupfer DJ သမား။ Nocturnal penile tumescence စိတ်ဓာတ်ယောက်ျားအတွက်လျော့နေသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 24: 33-46 ။
Meisler AW, ကယ်ရီအမတ်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ရောဂါအတွက် nocturnal penile tumescence စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏တစ်ဦးကဝေဖန် reevaluation ။ J ကိုအာရုံကြော Ment dis 1990; 178: 78-89 ။
Schmidt MH၊ Valatx JL၊ Sakai K၊ Fort P, Jouvet M. အခန်းကဏ္ sleep နှင့်သက်ဆိုင်သော erectile ယန္တရားများနှင့်ကြွက်များတွင်အိပ်စက်ခြင်းမျိုးဆက်တွင်ပါဝင်သည်။ J ကို Neurosci 2000; 20: 6640-6647 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Schwartz JM, Stoessel PW, Baxter Jr LR, Martin KM, Phelps ME ။ obsessive-compulsive ရောဂါ၏အောင်မြင်သောအပြုအမူပြုပြင်မွမ်းမံကုသမှုပြီးနောက်ဗဟိုဂလူးကို့စဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲမှုများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု 1996; 53: 109-113 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Althof SE, Levine SB, Corty EW, Risen CB, Stern EB, Kurit DM ။ စုံတွဲ ၁၅ တွဲတွင်လျင်မြန်စွာသုတ်ရည်လွှတ်မှုအတွက် clomipramine ကို double blind blind စမ်းသပ်ခြင်း။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 15; 1995: 56-402 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Strassberg DS, de Gouveia Brazao CA, Rowland DL, Tan P, Slob AK ။ လျင်မြန်စွာ (အချိန်မတန်မီ) သုက်လွှတ်၏ကုသမှုအတွက် Clomipramine ။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 1999; 25: 89-101 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Carter က CS, DeVries AC အ, Getz LL ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်များ monogamy ၏ဇီဝကမ္မအလွှာ: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်။ Neurosci Biobehav ဗြာ 1995; 19: 303-314 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
ဤစာတမ်းသည်ဂျူလီယန် M က Davidson, ဝါသနာမှတ်ဉာဏ်အတွက် 15 ဧပြီလ 1931-31 ဒီဇင်ဘာလ 2001 မှဆက်ကပ်အပ်နှံသည်။ ဤနေရာတွင်တင်ပြသည့်စိတ်ကူးများ၏အချို့တစ်အစောပိုင်းကဆောင်းပါး (Sachs အတွက်ပထမဦးဆုံးထင်ရှားပေါ်ထွန်း 11) နှင့်သင်ျခြိုသုတေသနပါ့ပေါ် 9th ကမ္ဘာ့ဖလားအစည်းအဝေးသြစတြေးလျ, 26-30 နိုဝင်ဘာလ 2000 မှာစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤစာတမ်းတစ်ခုစိတ္တဇ on-line ကိုသတင်းလွှာ UroHealth (တစ်ဦးဧည့်သည်အယ်ဒီတာ့အာဘော်အဖြစ် 14 ဇွန်လ 2002 ပျေါမှာထငျရှားhttp://www.urohealth.org/editorials).